भाषाभन्दा माथि कोही हुँदैन : शरच्चन्द्र वस्ती - Choicekhabar.com
Choicekhabar । २०७४ भाद्र २०, मंगलवार ०६:५१ मा प्रकाशित
भाषा प्रयोगका तौरतरिका सिकाउने नयाँ पुस्तक निकाल्नुभएछ । यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ? ‘हाम्रो भाषा’ नै पर्याप्त थिएन र ?
त्यसकै अनुक्रममा आम भाषा प्रयोगकर्ताका लागि शुद्ध, सही र प्रभावशाली नेपाली लेख्न बाटो देखाउने एउटा सशक्त र छरितो पुस्तकको आवश्यकता महसुुस गरी मलाई यो पुस्तक लेख्न आग्रह गरियो । प्रतिष्ठित भाषासेवी, लेखक, पत्रकारहरूको बैठकले यसले समेट्नुपर्ने विषय, पक्ष र अँगाल्नुपर्ने शैली मात्र होइन, यसको नामसमेत तय गर्‍यो । सोही अनुरूप मैले यो पुस्तक तयार गरेको हुँ ।
२०६९ सालको उक्त अभियानले आम नेपाली भाषाभाषीमा आफ्नो भाषाप्रतिको चेतना र संवेदनशीलता ह्वात्तै बढाइदिएको थियो । यसैबीच, गत वर्ष संयुक्त अक्षरका खुट्टा काटेर लेख्नुपर्ने आदेशविरुद्ध उनीहरू आन्दोलित भए । फलस्वरूप भाषामाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गरी उल्टो बाटो हिँडाउन लागिपरेका निकायहरू रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिए र आफूले गरेको गल्ती स्विकार्दै नेकशुले–२०६९ ले देखाएको दिशातिर अभिमुख हुन बाध्य भए । यसै क्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संयुक्त अक्षरका खुट्टा नकाट्ने, जथाभावी पदवियोग नगर्ने र शब्दकोशबाट विस्थापित गरिएका शुद्ध हिज्जेका शब्दहरूलाई पुन: शब्दकोशमा समावेश गर्ने अर्थात् २०४० सालको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा फर्कने निर्णय गर्‍यो । तर, निर्णय भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि यसतर्फ कुनै काम भएको छैन । परिमार्जित मान्यता र नियमहरू व्यवस्थित रूपमा आएका छैनन्, आधिकारिक शब्दकोश प्रकाशित भएको छैन अनि पाठयपुस्तकहरूमा रहेको भद्रगोल सच्याइएको छैन । अब शुद्ध र सही नेपाली कसरी लेख्ने त भनेर बाटो देखाउने कुनै माध्यम छैन । यो अन्योल र शून्यताका बीच यो पुस्तक सही बाटो देखाउने एक मात्र आधारका रूपमा उपस्थित हुन पुगेको छ । यस प्रकार, पुस्तक प्रकाशनमा भएको विलम्बले यसको उपयोगिता र सान्दर्भिकतालाई झन् टडकारो बनाएको छ ।
होइन । चार दशकदेखिको कसरत हो यो । यसको सूत्रपात २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्‍यो, जसलाई २०४० को शब्दकोशमा लागू गरियो । संस्कृतबाट आएका तत्सम शब्दलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने, त्यसबाहेक अन्य सबै भाषाबाट आएका त्यस्तै शब्दको भने हिज्जे बिगारेर लेख्नुपर्ने उदेकलाग्दो नियम घोषणा गरेर थालिएको थियो भाषामाथिको अनधिकृत हस्तक्षेप । अनधिकृत किनभने यसो गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन— चाहे त्यो कुनै विद्वान्, विद्वत्समूह, कुनै निकाय, सरकार वा सार्वभौम संसद् नै किन नहोस् । यो कथित नियम अन्तर्गत श/ष को सट्टा स मात्र र दीर्घ ई/ऊ को सट्टा ह्रस्व मात्र लेख्नुपर्ने गराइयो । अनि हिज्जे बिगारेर अंगभंग गरिएका शब्दहरूलाई पहिलो दर्जामा उकालेर शब्दकोशमा मूल प्रविष्टि दिइयो र हिज्जे नबिगारिएका शुद्ध शब्दहरूलाई दोस्रो दर्जामा झारेर वैकल्पिक प्रविष्टि दिइयो । यसले भाषामा अराजकताको अन्तहीन शृंखलालाई जन्म दियो । वर्षेनि जस्तो जथाभावी हिज्जे बिगार्दै जाने, जथाभावी पदवियोग गर्ने, वर्णमालाबाट अक्षरहरू नै हटाइदिने अनि संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने कुचक्र यसकै परिणाम थियो ।
तपाईंले पुस्तक तयार पार्न निकै मिहिनेत गर्नुभएको भनिएको छ । तर यो गल्ती/अशुद्धिहरूको प्याकेज जस्तो देखिन्छ । संयुक्त क्रियापद जोडेर लेख्ने भन्दाभन्दै धेरैतिर छुट्टिएको देखिन्छ (गर्न हुँदैन, जोड्नु पर्दैन), अंग्रेजीका एकै खाले कतिपय शब्दको हिज्जेमा भिन्नता देखिन्छ (clinic/क्लीनिक, visa/भीसा, spirit/स्पिरिट), शृ (शृंखला) हुनुपर्ने ठाउँमा श्रृ (श्रृंखला) पाइन्छ अनि चन्द्रविन्दु पनि घटेका छन् । असावधानीवश यस्तो भएको हो कि यस्तै गर्न खोजिएको हो ?
श/ष, ई/ऊ हटाउने नियमले भाषालाई नराम्रो असर पार्‍यो भनेर यसैलाई संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
सूत्रबद्ध रूपमा भन्दा, यसले हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न राष्ट्रिय भाषाका शब्दहरूको अंगभंग गरेर तिनको शुद्ध रूपलाई नेपालीमा अशुद्ध र अग्राह्य घोषित गर्छ । हरेक समुदायको अस्मिता र पहिचानको एउटा प्रमुख आधार भाषा हो, यसले त्यसैमा ठाडो हमला बोल्छ । आफ्नै मातृभूमिमा पितृपुर्खादेखि प्रयोग हुँदै आएका आफ्नो भाषाका शब्दलाई राज्यसत्ताको बलमा कसैले अग्राह्य घोषित गर्छ, तिनको अंगभंग गर्छ र बिगारिएका शब्द प्रयोग गर्न बाध्य बनाउँछ भने सोच्नुस्, उनीहरूको मनमा कति ठूलो चोट पर्छ । यसले उनीहरू सबैमा नेपाली भाषाप्रति वितृष्णा र विद्वेषभाव पैदा गर्दै लगेको छ, जसले अन्तत: भाषिक द्वन्द्व, विग्रह र विखण्डनमा पनि पुर्‍याउन सक्छ । यसले नेपाली भाषालाई असहनीय धक्का दिन सक्छ । कैयौँ देशमा त्यहाँका भाषा यसै गरी विस्थापित गरिएका छन् । यसतर्फ हामी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ ।
यसको उत्तर त्यही तर्कमा निहित छ । ‘शहर’ शब्द नेपालीमा अरबीबाट होइन, उर्दूबाट आएको हो, त्यसैले ‘शेहर’ को कुरा उठाउनु कुतर्क मात्र हो । हाम्रो आग्रह त नेपालीमा आएर स्थापित भइसकेका शुद्ध शब्दलाई बलजफ्ती भाँचकुँच नगरौँ भन्ने मात्रै हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, आगन्तुक शब्द हाम्रो भाषामा आफैँ पस्न आएका अवाञ्छनीय शरणार्थी होइनन्, आफ्नो भाषालाई समृद्ध र बढी सम्प्रेषणीय बनाउन हामीले सादर निम्त्याएका र भाषिक नागरिकता प्रदान गरेका ‘व्यक्ति’ हुन् । आफ्नो गर्जोले हामी कुनै विदेशीलाई नागरिकता दिन्छौँ भने ‘नेपाली हाइट’ मा मिलाउनुपर्छ भनेर उसका खुट्टा काट्न वा नाक ताछ्न थाल्दैनौँ । त्यो असभ्यता, बर्बरता र कृतघ्नता हो । तिनले यहाँको नियम–कानुन र प्रचलन भने अवश्य मान्नुपर्छ । आगन्तुक शब्द पनि यस्तै हुन् । जबर्जस्ती तिनको अंगभंग गर्न मिल्दैन । आफू सग्लो रहेरै तिनले हाम्रो भाषिक नियम–कानुन मान्नुपर्छ । मानेकै छन् । हाम्रै नियम अनुसार बहुवचनमा जान्छन्, हाम्रै क्रियापदबाट नियन्त्रित हुन्छन्, तिनमा हाम्रै विभक्ति हाम्रै पाराले लाग्छन्, तिनको प्रतिनिधित्व पनि हाम्रै सर्वनामले गर्छन् ।
बिगारिएकोबाट नबिगारिएकोतिर, शुद्धतातिर जानुपर्छ भन्नु वास्तवमा कुनै आग्रह नै होइन । यो त मानिसको मूल प्रकृति नै हो । मानिस अज्ञानबाट ज्ञानतिर, अव्यवस्थाबाट व्यवस्थातिर, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर नै जान चाहन्छ । मानवसभ्यताको विकास नै यसरी भएको हो । मानिस भाषामा पनि मूल शब्दसँग राम्रो हिमचिम नहुन्जेल मात्र अशुद्ध वा अपभ्रंशले काम चलाउँछ, त्यसपछि त मूल र शुद्धतिरै रमाउन थालिहाल्छ । ‘आकाश’ र ‘अकास’ दुवै राख्नुस्, ‘आकाश’ कै प्रयोग गर्छ । केटाकेटीमा ‘नवम्बर–दिसम्बर’ भनेर पढेकाले ठूलो भएपछि ‘नोभेम्बर–डिसेम्बर’ लेख्न थालिहाल्छ । नजानुन्जेल ‘पिल्सिङ’ भन्छ, शुद्ध रूप ‘पेन्सन’ रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त्यही भन्न रुचाउँछ । ‘पिल्सिङ’ लाई मेट्ने वा हटाउने भन्ने कुरै होइन, जानेपछि स्वत: ‘पेन्सन’ तिर जान्छ भन्ने हो । यहाँ त ‘पेन्सन’ लाई हटाएर ‘पिल्सिङ’ तिर जाऊ भन्ने उर्दी आउने थालेर पो आपत् परेको हो । शहर, कानून, खुशी, गरीब, शहीद, स्कूल, कार्टून, फेशन, शेयर जस्ता शब्दमा पनि यही भएको हो ।
तर, तपाईंका नजरमा गलत नै भए पनि धेरैजसो प्रयोगकर्ता आगन्तुकको तद्भवीकरणमा बानी परिसके नि त ? जस्तो— कम्प्युटरमा ‘सहर’ लेख्दा एकातिरको की थिच्ने बानी परेको छ, अब ‘शहर’ लेख्नुपरे अर्कातिर थिच्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीले खालि हिज्जे सिकेरै जिन्दगी बिताउनुपर्ने ?
हेर्नुस्, नजानेर उल्टो जुत्ता लगाउन थालियो भने त्यसमा पनि बानी पर्छ, त्यसपछि सुल्टो लगाउन थाल्दा दुई–चार दिन अप्ठयारो लाग्छ । तर सुल्टो के हो भन्ने थाहा पाएपछि त सुल्टै लगाउनुपर्‍यो नि । यो त्यस्तै समस्या हो । एक–दुई हप्ताकै अभ्यासले यसको समाधान भइहाल्छ ।
समस्त शब्द आँखाले हेर्दा लामा देखिए भने छुट्टयाउने, नत्र जोड्ने चलन चलेको छ । यो पुस्तक पनि त्यसैको पछि लागेको हो ?
भाषाको भद्रगोल समाप्त पार्न अब गर्नुपर्ने काम के हो त ?
मूलत: भाषामाथिको अनधिकृत हस्तक्षेप फिर्ता हुनुपर्छ । आजका सम्पूर्ण समस्या र विकृतिको मूल स्रोत २०४० सालको शब्दकोशमा लागू गरिएको आगन्तुक शब्द सम्बन्धी त्यही नियम र शब्दको प्रविष्टि सम्बन्धी त्यही अराजकता हो । त्यो फिर्ता हुनासाथ विकृतिको मूल सङ्लिन्छ र त्यसपछि आएका विकृति स्वत: निरस्त हुँदै जान्छन्, शुद्ध शब्दहरू सही ठाउँमा प्रतिष्ठित हुन्छन् । त्यसपश्चात् यसै अनुरूप शब्दकोश निर्माण गरिनुपर्छ, स्पेलचेकर बनाइनुपर्छ, अक्षर र शब्दको उच्चारण सिकाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ र अनिवार्य नेपालीमा हिज्जेका नियम पढाउन बन्द गरी अभ्यासबाट हिज्जे सिकाउन थाल्नुपर्छ । भाषामाथिको अनधिकृत हस्तक्षेप फिर्ता हुनासाथ समस्या समाप्त हुन्छन् । किनभने, नेपाली भाषामा कुनै समस्या छैन, समस्या त जबर्जस्ती लादिएका मात्र हुन् ।
यत्रा समस्या यति सजिलै कसरी समाधान होलान् ? यो त अतिरञ्जित कल्पना भएन र ?
यो कल्पना होइन, धरातलीय यथार्थ हो । यसको प्रमाण स्वयं अनधिकृत हस्तक्षेपहरू नै हुन् । किनभने, नेपाली भाषामा दुईतिहाइजति स्थान संस्कृतका शब्दले ओगटेका छन् । हिज्जेका दृष्टिले सबैभन्दा जटिल र कठिन शब्द त्यहीँ छन् । तर तिनमा हस्तक्षेप नगरिएकाले कुनै समस्या अथवा विवाद छैन । सलल्ल बगेर आएका छन् र तिनैले नेपाली भाषाको गरिमा जोगाएका छन् । बाँकी एकतिहाइमध्ये पनि दस प्रतिशतजति मात्र स्थान ओगट्ने आगन्तुक शब्दहरूको हिज्जेमा हस्तक्षेप गरिएका कारण आज यो वितण्डा खडा हुन पुगेको छ । यद्यपि, हिज्जेका दृष्टिले यी शब्द निकै सरल र सहज छन् । अब भन्नुस्, अनधिकृत हस्तक्षेप फिर्ता हुनासाथ जबर्जस्ती लादिएका समस्या किनारा लागेर यी पनि त्यसै गरी सलल्ल बग्न थाल्छन् कि थाल्दैनन् ?
यस सन्दर्भमा तपाईंको पुस्तक कहाँनेर छ त ?
यसले अनधिकृत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरी सही बाटो देखाएको छ । त्यसैले पनि यो सरल, सहज र स्पष्ट छ । नेपाली भाषाको अबको बाटो यही हो । नेपाली लेख्न चाहनेले सामना गर्नुपरेका सबै समस्या समाधान गर्न र अन्योल समाप्त पार्न प्रयास गरेको छ । आफ्नै पुस्तकबारे म अरू के भनूँ ?